पालिका खबर Archives - उज्यालो पोस्ट::उज्यालो पोस्ट
यही बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि रुपन्देहीको सैनामैनामा पनि राजनीतिक दलहरु चुनावी मैदानमा छन् । दलहरुको घरदैलो अभियान जारी छ । नेकपा एमालेबिरुद्ध गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी...
नेकपा (माओवादी केन्द्र) सैनामैना वडा नं. १ को पार्टि कार्यालय उद्धघाटन
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टि (माओवादी केन्द्र) सैनामैनाले चुनावि सरगर्मि बढेसंगै धमाधम पार्टि कार्यलय उद्घाटन गरेको छ । आज एक भव्य समारोहको आयोजना गरी सैनामैनाको वडा न.ं १ को वडा पार्टि कार्यलय उद्घाटन गरेको छ । उद्धघाटन...
माथागढी गाउँपालिकाकाे अायाेजनामा”स्थानीय स्राेत साधनको सदुपयोग गराैं सीप सिकाै अात्मनिर्भर बनाैं भन्ने उदेश्यका साथ गरिबी निवारणका लागि लघु उद्मम विकास कार्यक्रम (मेडपा) ७ दिने उद्ममशिलता विकास तालिम कसेनीमा सम्पन्न भएको छ समापन कार्यक्रममा बोल्दै माथागढी गाउँपालिका...
पाल्पा- जिल्लाकाे तिनाउ गाउँपालिका वडा न ४ सत्यवतीकाे गीजनचाैर र बाैरीडाँडा टाेलकाे २५ जना महिलाहरूलाई सिलाई कटाइ तालिमकाे साथमा एक एक वटा सिलाई मेसिन प्रदान गरिएको छ । “गरिबीलाई राेजगार,समृद्ध तिनाउकाे आधार ” भन्ने...
माघ १५, सैनामैना । सैनामैना जेसीसको पद हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शनिवार आयोजित एक विषेश समारोहका बिच वर्ष २०२२ का लागी अध्यक्षमा निर्वाचित रामचन्द्र ढकाल सहित अन्य नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई पद हस्तान्तरण...
रमेश गैरे, माघ ५ । ‘समानता, सद्भाव र न्यायका लागि दलित एकता हाम्रो ऐक्यवद्धता’ भन्ने मुल नाराका साथ अगाडि बढीरहेको सैनामैना दलित उत्थान समिति, सैनामैनाको प्रथम नगर सम्मेलनले अम्बिका परियारको अध्यक्षतामा उनन्तीस सदस्यीय नया कार्यसमिति...
बुटवल, माघ ५ बुटवल उपमहानगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गरिएको छ। २०७५ साल असार ८ गते पुर्वअर्थमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णु पौडेलले शिलान्यास गरेको उक्त भवनको बुधवार पौडेलले नै भर्चुवल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका हुन्। भर्चुवल माध्यमबाट...
सैनामैना नगरपालिकामा डेलिगेसन
सैनामैना नगरपालिका वडा नं. ५, मा रहेको नमुना टोल बिकास संस्था अन्र्तगत सेवा पथका जनता आफ्नो गुनासो लिएर सैनामैना नगरपालिकामा डेलिगेसन गएका छन । सैनामैना नगरपालिका कार्यलयको छेवैमा रहेका आम जनता बर्षौदेखि ढल निकास नहुंदा...
बुटवल, पुस ३०। सैनामैना नगरपालिकाका को १० औ नगरसभा सुरु भएको छ। नगरपालिकाको दशौ नगरसभामा बोल्दै नगरप्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले समृद्ध नगरपालिकाको सपना विस्तारै साकार हुदै गएको बताएका छन्। नगर प्रमुख कार्कीले समृद्धि नगरपालिकाको लागि...